Mas'uuliyiin ka kala socda Jabuuti iyo Yurub oo ka wada hadlay horumarinta - Sabahionline.com
Mas'uuliyiin ka kala socda Jabuuti iyo Yurub oo ka wada hadlay horumarinta
Wasiirka Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga ee Jabuuti Maxamuud Cali Yuusuf ayaa Axaddii (3-dii Maarso) waxa uu mashaariicda horumarineed ee socda ee uu maal-galiyo Midowga Yurub kala hadlay Ku-xigeenka Xog hayaha Guud ee Adeegga Dibadda Yurub Maciej Popowski, sidaana waxa sheegay La Nation-ka Jabuuti.
Wasiirrada Jabuuti ayaa ku sheegay dalabaaadka mucaaradka 'wax aan la fahmi karin'
Mas'uuliyiinta Jabuuti iyo Midawga Yurub oo ka wadahadlay taya-dhiska aqoonta badaha
Labada mas'uul ayaa ka wada hadlay mashaariicda ay kamid ka yihiin macaaneeynta biyaha iyo barnaamijyada khuseeya tamarta nadiifka ah.
Yuusuf ayaa sidoo kale Popowski ku soo qaaday doorashooyinkii barlamaaniga ahaa ee 22-kii Febraayo ka dhacay Jabuuti, isaga oo tilmaamay in kormeerayaashii caalamiga ahaa ay caddeeyeenin doorashooyinku ahaayeen kuwo lagu guulaystay oo hufnaa, inkasta oo ay jiraan dibad-baxyo ay wadaan mucaaradku.
Yuusuf waxa uu sheegay in tir tiriddii hannaankii liiska aqlabiyadda uu muujinayo ixtiraamka ay xukuumadda Jabuuti u hayso afkaarta dimuqraadiyadeed ee oggolaanaya in aragtiyada mucaaradku yimaadaan barlamaanka. Isbahaysiga Madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle ee Aqlabiyadda Madaxweynenimada ayaa horay u heeysan jiray dhammaan kuraasta barlamaanka tan iyo 2003-dii.
Popowski ayaa hoosta ka xariiqay kaalinta Jabuuti bacdamaa ay saldhig istiraatiiji ah u tahay dadaallada reer Yurub ee la-dagaallanka burcad-badeednimada, waxaana uu xukuumadda Jabuuti ku ammaanay in ay ciidamo u direen Soomaaliya kuwaas oo qayb ka noqda Howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya.